Megacubo: ဘာသာစကားများစွာနှင့်အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းပေါ်သော IPTV player များအသုံးဝင်သည် Linux မှ
Megacube ငါတို့နောက်တစ်ခု မာလ်တီမီဒီယာလျှောက်လွှာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခံရဖို့။ အကြောင်းကိုပို့စ်တင်ပြီးနောက် ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်နှင့် Stremioအခုဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစရာကောင်းတဲ့အလှည့်ပါ IPTV Player များမြင်နိုင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသော တိုက်ရိုက်တီဗီတွင် နှင့်အင်တာနက်ပေါ်မှဗီဒီယိုများ။
Megacube ကနေအကြောင်းအရာကိုလောင်ရန်အလွအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် streaming တီဗီလိုင်းများအပါအဝင်၊ အင်တာနက်နှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာ၌မဆို ရေဒီယိုလိုင်းများ။ ထိုလူအပေါင်းတို့သည်တစ် ဦး မှတဆင့် ဖော်ရွေပြီးရိုးရှင်းသော interface ကို ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အချို့သောသုံးစွဲသူများအတွက်အတော်လေးဆွဲဆောင်မှုရှိသည်၊ တခါတရံအခြားအလားတူပရိုဂရမ်များထက်များစွာပိုသည်။
အဆိုပါအညီ လျှောက်လွှာ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
"MegaCubo သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးလူတိုင်းအတွက်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများမရှိပဲအခမဲ့ရနိုင်သည်။ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအင်တာနက်သုံးစွဲသူများအားအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုရန်ရိုးရှင်း။ မြန်ဆန်။ လက်တွေ့ကျသောအတွေ့အကြုံများကိုကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်ပြီး browser မှတစ်ဆင့်ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းတို့ကြုံတွေ့ရသောပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။".
ဒါ့အပြင်၎င်းအတွက် executable နှင့်အတူပါရှိသည် Windows (.exe) နှင့် Linux (.AppImage / .tar.gz)နှင့်ဘာသာစကားထောက်ခံမှုနှင့်အတူကြွလာ စပိန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပေါ်တူဂီနှင့်အီတလီ။ ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ site မှဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်အဖြစ် GitHub.
Miniplayer modeကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုမျက်နှာပြင်၏ထောင့်တွင်ကြည့်ရှုနေစဉ်အခြားမည်သည့် site သို့မဟုတ် application ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်ရန် Miniplayer သို့မဟုတ် Miniature Player mode တွင်ပြန်လည်ထုတ်ဝေထားသောအကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်ပံ့ပိုးပေးသည်။
ကြော်ငြာဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်မှတ်ချက် - ကြော်ငြာအကြောင်းအရာကိုပြသဖို့လွယ်ကူစေတယ်၊ ​​သုံးစွဲသူတွေအတွက်ပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသုံးစွဲရတယ်။
အကြိုက်ဆုံးများ၏လွယ်ကူသောစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေ - အစီအစဉ်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကဏ္ to ကိုဖွင့်ထားတဲ့ချန်နယ်တခုကို ၄ င်းကိုနောက်မှတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးတယ်၊ ထည့်သွင်းရန်“ Ctrl + D” ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖယ်ရှားရန်၊ အကယ်၍ ရုပ်သံလိုင်းဖွင့်လျှင်သို့မဟုတ်ဖွင့်နေလျှင်ထပ်ပေါင်းရန်“ Ctrl + D” ခလုတ်ကိုထပ်နှိပ်ပါ။
အခြား- လိုင်းအသစ်များကိုအစဉ်မပြတ်ဖြည့်စွက်သည့်သုံးစွဲသူများ၏တိုးပွားလာနေသောအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အကူအညီပေးလိုင်းများအပိုင်းတွင်ထင်ရှားပြီး၎င်းမှတစ်ဆင့်အင်တာနက်ပေါ်မှရရှိသောပရိသတ်များ၏အချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဖော်ပြပေးနိုင်သည်။ အခြားသူများအကြားပိုမိုအဆင့်မြင့်။
install Megacube အလွန်အမင်းလွယ်ကူသည်သင်ရုံအတွက် run ဖို့လိုအပ်ပါတယ် root terminal la command ကိုအမိန့် အောက်ပါ:
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွင်၎င်းကိုကျွန်တော်မှရှောင်ပြေးခဲ့သည် လမ်းကြောင်း / ရွေးချယ်ပါ ငါ့ပုံမှန်အသုံးပြုသူနှင့်အတူ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအခွင့်ထူးများ (sudoers)။ command ကိုပြီးတဲ့အခါအမှားအယွင်းမရှိရင်တိုက်ရိုက် access ကိုဖြတ်ပြီး execute လုပ်နိုင်ပါတယ် အဓိက menu, မာလ်တီမီဒီယာအမျိုးအစား.
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စတင်သောအခါ၊ သင်အသုံးပြုလိုသည်ကိုလျှောက်လွှာကမေးသည် သီးသန့်သို့မဟုတ် shared mode ကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုအဘို့, ကျနော်တို့ဒုတိယ option ကိုရွေးပါထို့နောက်၎င်း၏အဘို့ ရှာဖွေရေးဘား ငါတို့ရှာကြ၏ အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာ ကြောင်းနှင့်အတူတိုက်ဆိုင် ရှာဖွေပုံစံ။ link တစ်ခုကိုရွေးပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပြသထားသည့်များအနက် application သည်ရွေးချယ်ထားသည့် channel ၏ content နှင့်၎င်းကိုအချိန်နှင့်အမျှဆက်သွယ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားသည်။
တိုတိုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ့ကိုတစ် ဦး ပုံရသည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာ အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကိစ္စတွင်အတွက်အသုံးပြုရန်ကမသုံးနိုငျသညျ Kodi, Stremio, ပေါက်ပေါက်အချိန် ပြီးတော့သင်အသုံးပြုရုံထက်မကလိုချင်သည် VLC ဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်တစ်ခု torrents။ ငါသည်လည်းငါ၏အတှေ့အကွုံအရသိရသည် ဖွင့်ရန်အချိန်များစွာကြာ ငါထင်ပေမယ့်ဒါကငါ့ရဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမြန်နှုန်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Megacubo»တစ်အသုံးဝင်သောနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင် IPTV Player (အင်တာနက်ရုပ်မြင်သံကြား)လျင်မြန်။ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည် တိုက်ရိုက်တီဗီတွင် အင်တာနက်မှတဆင့်ဗီဒီယိုများ၊ အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Megacubo - ဘာသာစကားများစွာနှင့်အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းအိုင်ပီတီဗွီဖွင့်စက်
ubuntu kinnamon remix 20.04 မှာငါသုံးနေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာသိပ်တော့မသေချာဘူး၊ ဝေမျှလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပြင်သစ် Alicea ဟုသူကပြောသည်
အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ application, ငါဖုန်းနှင့် Android box အတွက်ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ပါတယ်
FRANCISCO Alicea အားစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်မှာပြproblemsနာတွေရှိနေတယ်၊ ​​အဲဒါကငါ့ကိုအသံမပေးနိုင်ဘူးငါ linux mint 19.3
ဆမ်ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေခဲ့တယ်၊ အဲဒီအသံပြonနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေမတွေ့ရဘူး။ ကျွန်တော်ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူး။ ငါ Stremio ကိုသုံးပါ၊ ငါလက်ရှိမည်သည့်ပြproblemနာမရှိဘဲအသုံးပြုပါ။